Kuthiwa ukuba isilwanyana ngumgcini weengcambu, ukukhulula ukuxhatshazwa kommkeli, kumkholisa emva komhla osebenza nzima. Kwiindawo zokuphila zemihla ngemihla abantu basuka kwimihlaba yasendle kwaye sele kusisiko ukuba sibone inja yethu emngceleni wendlu okanye ikati elikhukhumelayo ekhuphuka itafile, kuthi thina zizilwanyana eziphathekayo, nazo zifanelekile kwimpilo yesixeko esisiphelo.
Oku kukhokelela ekubeni kwixesha lethu inani labathandi bezandla eziqhelekileyo lande kakhulu. Abantu bafuna ulungelelaniso, baqala ukuqala izilwanyana ezahlukeneyo, ngaphandle kwebhola evamile, i-barsik, njl njl. Kodwa ingabe i-octopus enetyhefu iyavuya kumnini okanye igcine i-pygmy hippopotamus?
Inxalenye ethile yembali.
Umnqweno wokuba "isilwanyana" esingaqhelekanga kuqala savela kwiSixeko seMvu, iRoma yasendulo. Yonke yaqala ngoomlawuli waseTroyan, owawisela ukuba ikhulukhulu zikhangele izilwanyana ezingenangqungquthela kwimiphumo ephezulu. Emva koko le fashoni yadlulela kwamanye amazwe, umzekelo, kwakungumfashini ukuba i-padishahs idibanise ama-cheetah amakhulu ukuze azingele kunye nabanye abalawuli. Bathi ookhokho baseSlavic bazingela kunye neparadesi ethile, njengama-cheetah.
Yintoni endiyidingayo ukuba ndiyazi ukuba ndifuna ukuba nesilwanyana esingavamile?
Xa utyala isilwanyana esingenasidlangalaleni, umntu makakhumbule ukuba zingaphi iindlovu ezingayi kubaleka ehlathini, ngoko kuyafaneleka ukuba uqaphele, kuba isilwanyana sasendle sisoloko sisendle kwaye nangaliphi na ixesha sinokuvusa isilwanyana semfuyo kwaye awuyi kuvuya. Kwakhona kufuneka kukhunjulwe ukuba, emva koko, isilwanyana esincike ngokupheleleyo kuwe. Ngako oko, igama elithi "izilwanyana" lingasetyenziselwa ngezinye izilwanyana kwizilwanyana zasekhaya, kuba kuxhomekeke kuwe, usekelwe ekhaya kwaye ngelo xesha, ungalokothi udla ummelwane. Ngoko ke bangobani, ezi zifuyo ezinqabileyo?
Ziziphi izilwanyana ezilahlayo?
Mhlawumbi uye wakuva malunga nokuba abantu baqala ukufumana izilwanyana ezihlambulukileyo, i-mollusks, i-amphibians, iilwane, izibilini, iinambuzane kunye nezilwanyana ezinomdla. Izilwanyana ezinqabile kakhulu zihlala zizilwanyana ezinobuthi, kunye nezidlo, zonke iiparitha, ngokubanzi, zihlala zihlaziye kwaye zigcina indlu yezilwanyana, nokuba ziyingozi, zide nazo zonke iifenethi, eyingozi kunye nengozi, kweso sibini isilwanyana sinobungozi kuluntu nakummandla wonke, kuba ukuba i-scorpion yakho iyabaleka, ayiyi kubulala umntu omnye. Ukuba ukucacisa, izilwanyana ezidliwayo zi: I-cheetah, i-panther, i-tarantula yaseburhulumenteni, zonke iintlobo zeesororha ezinobuthi, i-Royal cobra, intlanzi ye-fugu. Ungazami ukuzondla isilwanyana ngokwakho. Oku kufuneka kwenziwe ngeengcali-eziphene, nazo ungaqhagamshelani nabashushu. Amapolisa anakho naluphi na ixesha ukhetha isilwanyana kwaye uyithumele kwi-zoo, okanye inkunzi ebulalayo ingabanjwa.
Ndifuna umntu adideke, ndiqala phi?
Kuyinto enqwenelekayo ukuqala ngeentlanzi ezincinane, iintlanzi, iintaka. Kufanelekile ukukhumbula ukuba bafuna indlela ekhethekileyo kunye nokuzondla, musa ukukhawuleza ukufumana ingonyama, i-tiger okanye esinye isilwanyana esendle, ngokukhawuleza uya kuqonda ukuba oku akusikho okanye awukwazi ukuthwala uxanduva olunjalo. Sikucebisa ukuba uqale ngejaguans, i-chameleons (idibanisa ngokuhambelana nemvelaphi yeebhotshi =), ngoko ungayifaki ezweni lakho, kwakukho amava ayenziwayo xa inja yakho yommelwane ixatywe, kwaye andizange ndibe nexesha lokutshiza), nawe unokufumana i-piranhas, i-piranhas - kunye ne-Amazon, kunye ne-moriche ngokuthe ngqo, kodwa ukuba ungeva nama-piranhas, ndikucebisa ukuba ungayithathi.
Yintoni endiyidingayo ukuba ndibekwe ukusekwa "kweyilwanyana" engavamile?
Okokuqala, ngaphambi kokuthenga isilwanyana, kufuneka ufunde iincwadi ezininzi: malunga nokuhlala, malunga nemikhwa, uze uqale ukufunda ngoko masithi "izikhokelo zomxholo." Ngoko ke kuyimfuneko, xa udibene nenzululwazi, ukhethe igumbi, igumbi, indawo yenkomo kunye neemeko ezilungileyo kakhulu kwixesha lakho elizayo "umhlobo". Emva kokuba uthathe isilwanyana kuqala, sithathe kwi-veterinarian (ezizodwa, ezigqityiweyo kwiziko lezilwanyana, kungekho nayiphi na inkunkuma) kwaye zikhokele kuzo zonke izifo ezikhoyo. Musa ukulibala ukuba izilwanyana ezahlukeneyo kufuneka zondliwe ngamaxesha ahlukeneyo kunye namaxesha ahlukeneyo ngoko, umzekelo, i-piranhas kufuneka idliwe kathathu ngemini, kunye ne-fishfish kuphela ngamaxesha angama-2 kwaye kungenjalo ifa emva kweenyanga ezi-3. Kwakhona, xa kuthengwa iigundane, umzekelo, kuyimfuneko ukuqwalasela ubunzima begumbi, umzekelo, ukuba i-jerboa, ubukhulu beentonga kufuneka ubuncinane ubuncinane be-4 mm, kunye ne-rodchbacked rodent engaphantsi kwe-6 mm. Ngaphambi kokuthenga isilwanyana, kucetyiswa ukuba udibane neengcali.
Ukufumana isilwanyana esingaqhelekanga - uxanduva olukhulu lokukhumbula oku, unembopheleleko nje kuphela kwabanye, kodwa nakwizilwanyana, kuba lifana nomdala omdala "iTuzik" kuxhomekeke ngokupheleleyo kuwe.
Funda ukucinga kakuhle
Uthando lwe-horoscope lwenyanga kaMatshi
Umququ e yoghurt
Ukukhawuleza ukuyeka ukuncelisa
Kwaye ngoNyaka omtsha, uya kuvuya kuthi
I-shortbread cookie kunye nama-strawberries